Xishood dumar Q4aad – dhugasho
maxamedsheekafguun Abriil 21, 2017 sheekooyin, Uncategorized
Salma may lahayn saaxiibo gabdho ah oo badan, balse gabadh Yurub la yidhaahdo oo ay jaar yihiin ayey mar mar kala tashataa arrimaheeda, welise uma ay sheegin sheekada cusub ee dhex martay iyada iyo Subeer.
Yurub waxay ahayd gabadh bul-shaawiyad ah, oo leh axsaab badan oo gabdho iyo wiilal-ba leh.
Salma inkasta oo ay ahayd gabadh af-gaaban oo aan wax badan dadka la sheekaysan, haddana maalintii dambe ayey cabaar meel ku sheekaysteen gabadhii Yurub ee ay deriska ahaayeen, sheeko wadaagtana ay ahaayeen, ka dibna waxay u sheegtay inay sheeko ka dhexayso wiilka la yidhaahdo Subeer.
Salma may jeclaysan dhaliisha degdegga ah iyo hadalada aan wacnayn ee ay Yurub kula dul kuftay Subeer, waxayna ugu jawaabtay “walaal Yurubeey, ninkaasi aniga ayuu dookhayga noqday ee ii daa oo yeynaan ilaa heerkaa isla gaadhin, hana ku deg degin waxyaalaha qaarkood”.
Subeer muddada uu maqnaa marna wax xidhiidha ah lama soo samayn Salma 15 maalmood markii uu Subeer sii maqnaa, ayaa waxa dalka Jarmalka ka yimi nin ay Salma ilma-abti yihiin oo uu abtigeed dhalay ninkaa oo magaciisa la yidhaahdo Mursal, ujeedada uu Jarmalka uga soo dhoofay ee dalka uu u yimid, waxa weeye laba arrimood oo kala ah, inuu Eddadii Ruun dhakhtar debedda ah u qaado iyo inuu gabadh ka soo guursado dalkiisa, waxaana sidaa ku soo diray aabihii oo ah Ruun walaalkeed.
Mursal waxa ku adkaatay sidii uu ugu sheegi lahaa gabadha ay walaalaha yihiin ee uu imika damacu ka galay wuxu sidii ahaadaba, oo uu gooni u faqaba waxa uu markii dambe go’aansaday inuu la tashado odaygii Abtidoon ee Eddadii qabay, ka dibna wuxuu u sheegay inuu doonayo inuu guursado gabadha Salma, wuxuuna intaa u raaciyey inuu waqtigu ku yar yahay oo uu doonayo inuu dhakhso u laabto.
Subeer markiiba inta uu maydhay oo uu iska beddelay maryihii uu safarka ku soo galay ayuu degdeg uga soo baxay gurigii wuxuuna u dhaqaaqay dhinicii gurigii Salma, oo aan aad uga fogayn.
Hase-yeeshee hadal badan kama ay gaadhsiin karayn, sidaa awgeed, salaan kooban ka dib, waxay si degdeg ah, isugu qadimeen ballan, waxayna balameen fiidnimadii caawa, iyadoo ay goortaasi ahayd abaara 5:30-kii galabnimo.
Dhinaca kale, isla galabtaa waxa kulan u socdaa ninkii Mursal ee Salma inaabtigeed ahaa iyo odaygii Salma aabadeed ee Xaaji Abtidoon.
Mursal wuxuu hadalkiisa ku bilaabay: “Adeer, sidii aan horeba idiinku sheegay viisaha aan sido waxa ku qoran labo qof, labadaa qof mid waa eeddo Ruun, ka kalena waxaan ugu talo galay inaan ku kaxeeyo hadba gabadhii aanu calaf guur isku yeelano iyadoo markii aan xagaa ka soo kicitimayey ku talo galkaygu ahaa in aan dalkii ka soo guursado. Haddaba, adeer, markii aan wax indho indheeyey,nasiib wanaag waxay dookhayga iyo talodayduba ka badin waayeen inaan guursado inaabtiday Salma, waxaanan odhan karaa waa Illaaay mahadii haddii ay Eddaday Ruun iyo walaashay Salma noqdaan labada qof ee I raacaya. Markaa adeer, adiga oo aniga iyo inantaba waalid noo ah arrintaasi sideebay kula tahay, ma kula tahay inaad igu darto Salma.”
Ka dibna Xaaji Abtidoon intuu cabaar aamusay ayuu ku tiraabay: “horta Mursalow inankaygii baad tahay, waadna ogtahay aniga iyo Eddadaa Ruun inaanu wax ubad ah dhalay Salma oo qudha. Soomaalidaa waxay tidhaahdaa Geyaan ahaan ilmaabtigaa isugu xaq badan ama waxaaba inoo dhaqan ahaan jirtay inay ilma abtigu is guursadaan. Markaa waxba yaan hadalku ila dheeraane gabadhii inaabtidaa waan ku siiyey, waanan kuu meherinayaa”.
Dabadeed Mursal intuu soo kacay ayuu odaygii Xaaji Abtidoon gacan qaaday, kuna yidhi: “adeer waad mahadsan tahay ee gudoon wacan.”
Subeer iyo Salma waxa hadheeyey dareen muxubo oo uu midba midka kale aad u xiisaynayo, isla markaana waqtigan xaadirka ah dareenka caashaqu keli kuma aha dhinaca Subeer ee waxa labadoodaba sida caleemaha geeka u ruxaysa saxansaxo cishqi iyo quluubtooda biyo dhigtay. Waxayna xiligaa si xiiso leh u gorfaynayaan sidii ay uga midho dhalin lahaayeen hiyigooda jacayl iyo sidii ay ugu gogol xaadhi lahaayeen aayahooda mustaqbal.
Subeer iyo Salma waxay sheekada sii macaan sadaanba waxay saacaddu gaadhay 8:00 habeenimo, ka dibna Salma oo ka welwelsan gurigoodii iyo islaantii hooyadeed ee xanuunsanaysay ayaa codsatay inay sheekadu caawa halkaa ku joogsato, dabadeedna Subeer intuu Salma albaabka gurigooda keenay ayay is macasalaameeyeen.
Gabadhii Salma waxay markiiba degdeg u gashay gurigii, iyadoo ay aabaheed Xaaji Abtidoon iyo inabtigeed Mursal xaajo meel isla dhigeen oo ay iyada sugayaan, taas oo ay doonayaan inay arrinta ku wargeliyaan.
Sidoo kale Subeer wuxuu gurigoodii dib ugu noqday isagoo aad u niyad wanaagsan, wuxuuna la kulmay aabihii, oo uu sheegay inuu soo helay gabadhii uu guursan lahaa oo ay tahay Salma Xaaji Abtidoon, ka dibna odaygu inkasta oo aanay arrinta aad uga wada hadlin, haddana wiilkiisa ma tusin dareen diidmo wuxuuna ku yidhi: “aabo ma xuma’e aynu ka tashanno”, Subeerna wuxuu aabihii ugu jawaabay: “waayahay aabo”…
moustapha awaleh	 on Abriil 28, 2017 at 9:44 g
Asc dhamaan umaadaa somaliyeed waan salamayaa mel walibaa eey jogaan kaa nagacayguu waa mustafa waxan joogaa magalada jabuuti waxan jecleystay inaan idiin soo gudbiyoo qiso jaceyl oo dhab ah oo anii lafdigayga iguu dhacday lasocood washday.
Maliin malmaha kaa miid ah ayuu saxibkay ayaa ibaraay gabadh kadib wanuu is racnay gabadhi jaceyl baan waadaa degeynay wiiq kaadib jaceyl muug wen ayaan bilownay bill kadib gabadhi aan jeclaa waxay bilowday muugur iyoo been iyoo buugaan badaan kaadib xidhidh kii now dhaxeyey way kalaa jaartaay saabaab laan kadib waxan tiriyaay mansoo
Asmay aragtidaa nafteyday asibtow Aaid baan kuu sa ray
Anikunaa ayaankay kuu abarsanmayee waad égidontaa
uubax soo iftimow araagtidaa
uu nuguloo laguu omayaad
Tahay ee onkubaa idelkedd
waay kaa amuusenee
ee aragagaa nagaa karii 2 party wan idiin soo gudbin donaa
Qori daad wada!!!